FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MANGA LACY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika manga Lacy
Lacy mena, Lacy manga ary Lacy misy loko telo — Fahazoan-dàlana avy amin'i Karen Lewis avy amin'ny Lacy Dog Breeders Association
Blue Lacy Lalao Alika
Alika Lalao Lacy
Alika Lacy Hog
Texas Blue Lacy Lalao alika
Alika State Texas
Texas Lacy Dog
Ny Blue Lacy dia salantsalany amin'ny habeny miaraka amina fananganana maivana sy voalanjalanja nefa mahery. Ny hetsika Lacy mety dia milaza hafainganam-pandeha sy tanjaka ary fahakinganana tanteraka. Fohy sy malama ny palitaony. Misy karazany telo azo ekena ny loko. Ny volomparasy dia aloky ny volondavenona manomboka amin'ny volafotsy maivana ka hatramin'ny saribao mainty. Ny mena dia manomboka amin'ny crème maivana ka hatramin'ny harafesina. Ny tri dia manambatra ireo loko ireo amin'ny fototra manga sy marika mena miavaka mifanaraka amin'ny refy. Ny fotsy dia afaka miseho eo amin'ny tratra, ny vavony ary ny tongony. Samy manana ny anarana Blue Lacy ireo Lacys mena sy tricolored, noho ilay fototarazo misy loko manga ananan'izy ireo. Ny mason'ny Blue Lacys rehetra dia volomboasary mamirapiratra sy miavaka amin'ny loko mavo, izay manampy fikitika miavaka amin'ny endrik'izy ireo.
Ny Lacys dia manan-tsaina, mahery, mavitrika ary mailo. Noforonina tany am-boalohany mba hiasa kisoa feno ala, ny Lacy dia novolavolaina ho lasa mpiompy mpiompy, zanak'omby, mpihaza ary mpamadika. Manana fiara sy fahatapahan-kevitra tsy mampino izy ireo. Sahy sy be herim-po izy ireo fiompy omby sy mihaza lambo dia. Teritorialy voajanahary izy ireo ary hiaro ny fananany. Na dia manao namana tsara be aza i Lacys, dia tsy dia tsara loatra tompona passive . Mila fitoniana ity karazana ity mpitondra mazoto izay mametraka lalàna mazava. Mila manao fanazaran-tena tsy tapaka sy ara-batana sy ara-batana koa ny Lacys. Noho ny faharanitan-tsainy dia afaka zarina haingana hanao asa maro izy ireo.
Hahavony: 18 - 23 santimetatra (46 - 58 cm)
retriever miharo volamena rottweiler
Lanja: 30 - 50 pounds (13 - 23 kg)
Ny Lacys dia karazany salama tokoa. Noho ny fototarazo entin'izy ireo, ny Blue Lacys dia mety hiteraka Color Dilution Alopecia na olana amin'ny hoditra sy ny palitao.
Mifanaraka tsara amin'ny ankamaroan'ny fari-piainan'izy ireo izy ireo. Lacys manao alika an-trano tsara fa tiako koa ny alika any ivelany. Mety ho lasa mankaleo sy manimba izy ireo rehefa avela irery tsy misy atao, ka crate fiofanana no atolotra ho an'ny alika anaty trano. Mila toerana hihazakazahana ny Lacys ary mety tsy mety indrindra amin'ny fiainana an-trano.
Toy ny ankamaroan'ny karazan'asa miasa dia mila be dia be ny Lacy fitarihana sy fanatanjahan-tena . Noforonina ho alika miasa izy ireo ary aleon'ny mpiompy mametraka alika amin'ny fiompiana sy fihazana trano hitehirizana izany lova izany. Rehefa tsy mandeha dia tokony horaisina lava ny Lacys, mandeha an-tongotra isan'andro . Fa ny mandeha irery dia tsy ampy ho an'i Lacys. Betsaka no mila asa sarotra toa ny fiompiana, ny fihazana, ny fanarahan-dia, ny hakingana na ny fanidinana ho alika mahay mandanjalanja.
Manodidina ny 16 taona. Misy Lacys 16 taona mbola miasa omby sy mihaza.
Fohy volo. Fikolokoloana ambany.
Araka ny National Lacy Dog Association:
Ny alika Lacy dia nantsoina tamin'ny anaran'ny rahalahin'i Lacy - Frank, George, Ewin, ary Harry - izay nifindra avy tany Kentucky nankany Texas tamin'ny 1858 ary nanorim-ponenana tao amin'ny Hill Country. Ny fianakaviana dia nanamboatra ny karazany mba hiasa kisoa mandehandeha. Na dia tsy mazava aza ny tena fifangaroana, ny antontan-taratasy ara-tantara dia nilaza fa hazo fijalian'i a Greyhound , Mpiandry anglisy na scenthound, ary amboadia.
Araka ny lazain'ny Texas Lacy Game Dog Association:
Lacys dia novolavolaina tao amin'ny Texas Hill Country avy amin'ny rahalahin'i Lacy efatra (Frank, George, Ewin, ary Harry), izay nifindra monina avy tany Kentucky nankany Burnet County, Texas, tamin'ny 1858. Ny fahendrena nentim-paharazana, ary koa ny tantaram-pianakavian'i Lacy, dia mitazona izany Lacys dia ny vokatry ny Greyhound / scenthound / coyote lakroa.
info mix mixer beagle alemana
Loharanom-baovao marobe ihany koa no nanolo-kevitra fa ny fisian'i Lacys ao amin'ny Hill Country dia nisy akony lehibe tamin'i Fred Gipson, izay notezaina tao amin'ny Mason County mifanila aminy ary nalaza noho ny tantarany Old Yeller. Ny Dog Blue Lacy Game Dog dia nameno ny filan'ny Amerikanina mpanjanaka nandritra ny zato taona mahery teo amin'ny toeram-pambolena any Etazonia Andrefana Andrefana.
Ny fihenan'ny indostrian'ny fiompiana ankohonana, ary koa ny fampidirana ny haitao toy ny fiara amin'ny faritra rehetra, dia nitondra ny karazany Lacy lany tamingana na izany aza, ny fahitana azy indray amin'ny maha mpiara-dia mihaza azy dia nampitombo be ny fangatahana an'i Lacys. Izy ireo izao no karazany mahazatra indrindra ampiasain'ny mpampandrika amerikana.
Miompy / mihaza
LDBA = Fikambanan'ny mpiompy alika lacy
LGDR = Lacy Lalao Dog Registry
NLDA = Fikambanan'ny alika nasionaly lacy
TLGDA = Fikambanan'ny alika lalao Texas Lacy
UKI = Universal Kennel International
Fanapahan-kevitry ny Senat No. 436
kosa, Anisan'ireo karazana alika rehetra hita ao
Texas, vitsy no manana fikambanana miaraka amin'ny fanjakana manan-danja toa azy
izay nankafizin'ny Blue Lacy ary
kosa, Inoana fa karazana alika voalohany nanana
niainga tamin'ity fanjakana ity, ny alika dia nomena anarana ho an'ny fianakaviana Lacy,
izay namolavola ny karazany tamin'ny tapaky ny taona 1800 ho an'ny fiompiana sy
fihazana nidina avy amin'ny greyhound, scenthound, ary coyote stock,
ny Blue Lacy dia manana fahaizana miasa mafy izay manamarika ny
hatsaran-toetra henjana an'ny tanimboly any Texas ary
kosa, Ho fanampin'ny toerana niaviany sy ny
razamben'ny mpamboly, mirehareha hafa ity alika namana ity
miaraka amin'ny State of Texas: ny fianakaviana Lacy, ao anatin'izany
George W. Lacy sy ireo rahalahiny, nifindra avy tany Kentucky
Burnet County tamin'ny 1858 ary nanorim-ponenana tao amin'ny faritry ny ankehitriny
Ny Marble Falls dia am-polony taona maro taty aoriana, rehefa kapitera fanjakana vaovao
dia natsangana tany Austin, George Lacy ary ireo tompona hafa an'ny
Granite Mountain dia nanome ilay granite mena izay nampiasaina tao
shih poo sary lehibe feno
kosa, The Blue Lacy dia teratany Texas, alika miasa
nitaiza hanana andraikitra lehibe amin'ny asa fiompiana, sy alika
izay mpiompy tany am-boalohany no nandray anjara lehibe tamin'ilay trano
an'ny State Capitol, ary ity vakoka feno avonavona ity dia manome ny Blue Lacy
indrindra ny mari-pahaizana matanjaka any Texas ankehitriny, noho izany
tapa-kevitra, Ny Senat an'ny fanjakan'i Texas,
Ny mpanao lalàna faha-77, manome voninahitra ny karazana alika Blue Lacy ho
tena karazana Texas.
- Bill Ratliff -
Manamarina izany aho etsy ambony
Noraisin'ny Antenimieran-doholona ny fanapahan-kevitra
tamin'ny 8 martsa 2001.
- Betty King -
- Todd Staples -
Mpikambana, Senat Texas
Sary natolotry ny Graham's Blue Lacys
Sarge io. Sarge dia ohatra tsara amin'ny palitao manga Blue Lacy. Sary natolotry ny Graham's Blue Lacys
Blue Lacy miasa amin'ny alika omby — Sary nahazoana alàlana avy amin'ny Lacy Game Dog Registry
Shih Tzu amboahaolo terrier Mix
Sary natolotry ny Lacy Game Dog Registry
Calamity ilay vehivavy tricolor Blue Lacy, sary natolotry ny D-S Texas Lacy Game Dog. Ny vehivavy Blue Lacys dia tokony ho vehivavy kokoa noho ny lahy.
Calamity ilay vehivavy telo loko Blue Lacy, sary natolotry ny D-S Texas Lacy Game Dog
Jereo ohatra hafa momba ny Blue Lacy
Sary Blue Lacy 1
Sary manga 2
Sary Blue Lacy 3
amerikana foxhound black lab mix
lab st bernard mifangaro habe
alika omby aostraliana afangaro pitbull
sarin'i min pin chihuahua mix
mampiseho ahy ny sarin'ny iray irlandey wolfhound
sary terriers fotsy fotsy Andrefana
alika mpiambina alemanina any bernisy